Fandraharahana sy varotra sakafo :: Hampivelatra ny sehatra famokarana akoho ny KFC • AoRaha
Fandraharahana sy varotra sakafo Hampivelatra ny sehatra famokarana akoho ny KFC
Tranga fahita matetika ao anaty horonantsary hitantsika avy any ivelany ny fividianana sakafo, na dia ao anaty fiara aza ny mpanjifa sady fotoana fohy monja. Manomboka anio, hisitraka ny toy ireny ihany koa ny eto Madagasikara.
Hisokatra ho an’ny daholobe, etsy amin’ny Tana Waterfront Ambodivona, ny toeram-pisakafoanana KFC, izay mifantoka amin’ny akoho. Hitondra tosika eo amin’ny seha-piompiana akoho ny fahatongavan’io toeram-pivarotana malaza maneran-tany io.
“Hitondra tombontsoa maro ho an’ny Malagasy ity toeram-pisakafoana ity. Vokatra avy eto an-toerana avokoa no ampiasaina ka hampiroborobo ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara”, hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa tetsy Ambodivona, nandritra ny lanonam-pitokanana ny toerana, omaly.
I Madagasikara no firenena faha-137 ivelaran’ity orinasa ity. “Manomboka izao dia mitovy amin’ireo renivohitra any amin’ny firenen-dehibe ihany koa ny eto amintsika”, hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nandritra izany fitokanana ilay trano fisakafoanana izany, omaly.
Mivelatra ihany koa ny fifaninanana. “Mampirisika anay hiezaka hatrany sy hanatsara ny vokatra atolotray ny fahatongavan’ny KFC”, hoy, ohatra, i Chef Mbinina ao amin’ny La Gastronomie Pizza, mpifaninana mivantana amin’ity toeram-pisakafoanana vao nisokatra ity
Fisolokiana :: Zandary sy mpirakidraharaha samy naiditra am-ponja
Finoana :: Vita fanavaozana ny fiangonana Fjkm Analamaozatra Andasibe